Ninku muxuu ku dhahaa markuu ku jecel yahay | Ragga Stylish
Dadku waxay leeyihiin awoodaas lagu dhasho ee saadaalinta haddii qof na jecel yahay, iyo gaar ahaan haweenka, waxay umuuqataa in farsamadan lagu ogaanayo inay waxbadan taabanayso miyir-qabkooda. Laakiin qof kastaa wuu ka duwan yahay oo dadku mararka qaarkood ma muujiyaan nooc jacayl ah markay dareemaan jacayl.
Markuu qof ina jecel yahay oo aanu muujin inay ina jecel yihiin iyo in kale, taasi nama khusayso dad ahaan inuu yeesho xirfada garashada, sidaa darteed waxaan u baahanahay inaan ogaano astaamo ama shaybaarro yar yar oo aan ka gaabsan karno inay naga caawiyaan inaan kala saarno haddii ay tahay kaliya saaxiibtinimo ama ay runti jirto soo jiidasho jireed.
1 Ninku muxuu ku dhahaa markuu ku jecel yahay
2 Erayada uu ninku inta badan sheego markuu xiisaynayo
3 Kala daadisay baraha bulshada
Nin markuu dareemo dan gaar ah naag, goor dhow ama goor dambe waxay bilaabaysaa inay muujiso astaamo. Mararka qaarkood calaamadaha noocan ahi waa kuwo khiyaano leh mararka qaarkoodna maaha, sidaa darteed haweeneydu way jahwareeri kartaa, haddii ay dhab ahaantii rabto inay u dhigantaa ninkaas isla safka ah. Waan ognahay astaamo iyo dib-u-dhacyo go'aamin kara inuu qofku ku jecel yahay iyo in kale, laakiin, Ninku muxuu kugu yidhaa markuu ku jecel yahay?
Ninka markuu naag la yaaban yahay waxay dooneysaa inay yeelato qodobo guud. Markii khibradaha, faallooyinka, hiwaayadaha la isugu gudbiyo ama marka si fudud loo sheekaysanayo, haddii qofkaasi xiiseynayo, waxay isku dayi doonaan inay dareemaan soo jiidasho isku dhadhan ama isku dareen ah damqasho iyo soo jiidasho si loo wadaago isku mid.
Isagu ma caawin karo laakiin wuu kacsan yahay. Waxay muujisaa qallafsanaan, xiisad marka la hadlayo, sameeya faallooyin aan macquul ahayn, oo dhaqso ayuu u hadlaa. Laakiin mararka qaarkood wuxuu sidoo kale waqti dheer ku qaataa inuu ka fekero waxa uu faallo ka bixin doono ama uu leeyahay dabeecad shaki leh oo ku dhex milmeysa dhaqdhaqaaqyo aan dabiici ahayn.
Waxaa jira rag u dhaqma gabi ahaanba kuwa kale. In ninku yahay qof dhab ah oo qaan gaar ah had iyo jeer ma muujiso ama macnaheedu maahan inay tahay sabab uu kuu jecel yahay, waxaa jira waqtiyo uu gebi ahaanba ka duwan yahay oo had iyo jeer abuuro kaftan ama kaftan Wac haynta
Wadahadalka marwalba wuxuu tilmaamayaa xiriir badan la leedahay naagta, adoo raadinaya taageero ama raaxo. Waqtigan xaadirka ah isagu wuxuu leeyahay kalsooni waana sababta uu u doonayo inuu kasbado xitaa inbadan. Taasi waa sababta ay u wadaagaan walwalka, farxadaha ama wixii dareen ama waayo-aragnimo ah ee ku soo maray maalintii.
Erayada uu ninku inta badan sheego markuu xiisaynayo
Waxaa jira ereyo, weedho ama tilmaamo u muuqda inay qarxinayaan xiisaha uu ninku u qabo haweeneyda. Haddii aad tahay qof shaqada ka tagaya, weedho kama maqnaan doonaan wada sheekaysigaaga sida:
"Rabitaankeyga ugu weyn waa inaad haysato maalin qurux badan oo cajiib ah"Waxay muujineysaa inaad dooneysid in wax walboo adiga si fiican kuugu soo baxaan, in nolosha ay kula dhaqmeyso sida ugu wanaagsan ee suuragalka ah.
"Waxaan jeclaan lahaa inaan ku arko"Weedhani mar hore ayey wada sheegtay, laakiin qiyaasi hadduu ku yiraahdo "Waxaan u baahanahay inaan ku arko", ha ka nixin, maxaa yeelay hubaal weedhan waxay kaa dhigeysaa inaad jacayl ku qarxiso.
"Waxaad tahay qofka ugu cajiibka badan ee jira, waan jeclahay wax walba oo aad sameyso", waa dariiqa lagu muujiyo wax kasta oo isaga quseeya iyo sida uu kuugu qanco, laga yaabee inuu jacayl ku dhacayo.
Wax walboo aad ubaahantahay, isoo wac, waqtigu dhib malahan ", xiisaha ayaa sii socda oo aan ka waaban doonin inuu wax walba kuu sameeyo.
"Is ilaali naftaada, ii soo qor markaad guriga timaado", weedhani sidoo kale waxay bixinaysaa caddeyn inuu isagu xiiseynayo oo uu adiga kaa dan leeyahay.
"Waxaan sugayaa wicitaankaaga maxaa yeelay waxaan jeclahay inaan kula joogo, waxaan rajeynayaa inaan marar badan kulmi doono", hab kale oo aad ku tusi karto xiisaha weyn ee aad u qabto qofka kale.
Kala daadisay baraha bulshada
Marwalba ma yeelan kartid xiriir shakhsiyeed, shabakadaha bulshada waxay u shaqeeyaan sidii qaab kale. Haddii aad joogteyso xiriir joogto ah, waxaa muhiim ah in la ogaado haddii qofka kale uu adeegsado WhatsApp, tusaale ahaan, iyo haddii ay si joogto ah wax u qoraan. Iyada oo ay sidaa tahay, kaama tagi doono oo habka aad wax u qorto ayaa waliba faahfaahin badan ka bixin doonta.
Habka wax loo qoro ayaa kicin kara xiisaha, in ka badan ama ka yar iyadoo xoog la saarayo iyadoo kuxiran caado: Hadaad had iyo jeer bixinaysid subax wanaagsan ama habeen wanaagsan caddayntu way adag tahay. Isla sidaas oo kale ayaa dhacda marka ay tahay inuu ku jawaabo, haddii uu ku jawaabo si dhakhso leh oo dhakhso leh waa astaan ​​wanaagsan.
Haddii uu had iyo jeer ka warqabo xaaladdaada iyo faallooyinka iyaga ku saabsan, wuxuu kuu soo dirayaa sawirro, farriimo jilicsan, had iyo jeer wuxuu hayaa isgaarsiinta ugu horreysa wuxuuna raadiyaa hab ama cudurdaar uu kula kulmo. Isaguna aad buu kuu jecel yahay haddii aad si joogto ah u isticmaasho emoticons si aad weli u dareento naxariis badan oo dheeraad ah xaaladdiisa.
Waan xiiseynayaa sidee dareemeysaa, haddii aad wax u baahato, danaynayso danahaaga, wuu kula kaftamayaa si uu kaaga qosliyo wuxuuna si joogto ah kuugu wargaliyaa faahfaahin kasta oo ku dhacda noloshiisa.
Ha iloobin in calaamadda difaaca ee ninku u leeyahay haweeneydu had iyo jeer ay jirto. Xitaa haddii uusan tusaale u noqonin daqiiqado gaar ah, goor dhow ama goor dambe wuxuu tusi doonaa inuu adiga ku jecel yahay. Waxaan ka wada hadalnay waxa ninku ku dhihi karo ereyo, laakiin yaanan ilaawin taas lenguage jirka Waa mid kale oo ka mid ah canaasiirta sidoo kale la darsay oo caddeynaya in ninku ku jecel yahay. Haddii aad rabto inaad ogaato markay haweeneydu xiiseyneyso nin, sidoo kale waad naga aqrisan kartaa isku xirkaan
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Ninku muxuu ku dhahaa markuu ku jecel yahay
Sida loo tababaro leexashada kettlebell